Maamulka Trump oo malaayiin dollar u balanqaaday kaptanka Markab Iran laga leeyahay. - NorSom News
Maamulka Trump oo malaayiin dollar u balanqaaday kaptanka Markab Iran laga leeyahay.
Maraykanka ayaa diiwaanka madaw galiyay markabkaas Jimcihii, War ka soo baxay waaxda maaliyadda ayaana lagu sheegay in markabkaas loo adeegsaday in lagu qaado 2.1 milyan oo foosto oo shidaal ka cayriin ee Iiraan ah, arrintaasna ay ka faa’iidayaan Ilaalada kacaanka Iiraan.
Previous articleCaafimaadka maskaxeed ee ninkii masaajidka weeraray oo la baari doono.
Next articlePer Sandberg: Gacanta ma ahan qaabka kali ah ee la isku salaamo.